Sheekh Cali Dheere oo Shaaciyay Sababta ay u weerareen xarunta Turkiga Muqdisho iyo qasaaraha ay gaarsiiyeen. | Salaan Media
Sheekh Cali Dheere oo Shaaciyay Sababta ay u weerareen xarunta Turkiga Muqdisho iyo qasaaraha ay gaarsiiyeen.
Afhayeenka kooxda Shabaab ee ka dagaalanta koofurta, Bartamaha iyo Koofurata Soomaaliya, Cali Maxamuud Raage (Cali Dheere) ayaa waxa uu daaha ka rogay in ay qasaara badan Shabaabku ku gaarsiiyeen Turkiga weerar ay ku qaadeen xarun Turkigu ay ku sugnaayeen oo ku taalla Muqdisho
Cali Dheere ayaa waxa uu sheegay in ragii weerarka kuqaaday Xaruntasi ay dileen Lix ilaa toban Turkiyiin ah kadibna ay si nabad ah uga bexeen goobtaasi.
Waxa uu intaa raaciyay sabata ay Shabaaku u weerareen Turkiga in ay tahay mid ay iyaga ka arkeen maadaama sida uu hadalka u dhigay ay ka tageen Muslinimadii ayna gaalo garab siiyeen.
“Waxaa laga yaabaa in dad badan oo Soomaali ah ay la yaabaan Turkiga Weerarka lagu qaaday iyaga oo aaminsan in ay Muslimiin yihiin. Waxaan u cadeyneynaa in ay ka tageen Turkiyiintu Islaanimadii iyo diintii Allah Subxaanahu watacaalaa ayna garab u yihiin Gaalada ku duushay dunida Ismaalmka sida duulaankii Afganaistaan halkaas oo dad badan oo Muslimiin ah lagu xasuuqay”, Cali Dheere ayaa ku waramay.
Waxa uu intaa raaciyay in ay sii wadayaan weerarka ay ku qaadayaan xarumaha Turkiga ayna ula dagaalamayaan sida Ingiriiska iyo Mareykanka hadii ay ka joogsan waayaan dhibaatada ay ka wadaan dunida Islaamka.
Cali Dheere ayaa mar kale yiri, “Wiilasheennii Soomaaliyeed ayaan kula dagaalnay Riddo ay ku dheceen, mana Suura geleyso in aan Salaaxno Turkiyiin dhibaato nagu heysa.
Si kastaba, Sheegashada Cali Dheere ee ah in ay qasaara badan ku gaarsiiyeen turkiyiinta Muqdisho ku sugan weerarkii galabta ayaa waxaan jirin hadal kasoo baxay Turkiga oo lagu ayidayo ama lagu beeninayo.